IYINI Ukusetshenziswa Kwamathayela Iloli Ngama-Rubber Strips?
Abantu abaningi banomona wokubona abanye abashayeli abadala beshayela ngobuchule emgwaqweni. Eqinisweni, bonke baphuma ngaphandle kwe-novice step by step. Bazitholele ulwazi oluningi ngaphambi kokuthi bakwazi ukushayela kahle. Uhlobo luni lwabashayeli abalwazisayo kakhulu umshayeli weloli. Usayizi weloli i ...
Leyo Yindlela Yokukhetha Ukuze Uthole I-Flat Cart
Empilweni yethu, inqola isetshenziswa kabanzi. Imvamisa isetshenziswa emahhotela, ezitolo ezinkulu, amahhovisi, izinto, nsuku zonke, ezitolo ezinkulu, indawo yefektri nakwezinye izindawo eziningi. Ingakwazi ukuxazulula izinkinga eziningi zokuhamba futhi ilethe ukukhululeka okukhulu kubantu. Kodwa-ke, uma uthenga inqola ethambile engalungile neze, a ...
Ulwazi Lokwahlukanisa i-Wire Mesh
Ukuhlukaniswa kwamanje kwe-mesh yokuhlobisa insimbi kufaka i-mesh yensimbi yokuhlobisa insimbi kanye ne-aluminium alloy, ikhethini lokupholisa ngocingo lwethusi, ipuleti yensimbi ye-aluminium ipuleti lokuhlobisa i-mesh, ikhethini lensimbi yensimbi, inetha lokuhlobisa intambo, inetha lokuhlobisa udonga, njll. Okulandelayo, ake sithathe. ..